Dowladda Somaliya oo nasiib daro ku tilmaamtay dilkii Wariye C/risaaq Silver loogu geystay Galkacyo | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Dowladda Somaliya oo nasiib daro ku tilmaamtay dilkii Wariye C/risaaq Silver loogu...
Dowladda Somaliya oo nasiib daro ku tilmaamtay dilkii Wariye C/risaaq Silver loogu geystay Galkacyo
Dowladda Federalka Somaliya, ayaa waxay si xoogan u cambaareysay dilkii guracnaa ee xalay Magaalada Galkacyo loogu geystay Allaha u naxariistee Wariye C/risaaq Cali Cabdi (Silver).
Wasiirka Wasaarada Warfaafinta ee Somaliya Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow, ayaa qoraal caawa ka soo saaray dilka Suxufiga, oo ay geysteen ilaa saddex nin oo bistoolado ku hubeysnaa.
“Innaa Lillaahi Wa Innaa Illaahi Raajicuun, sida ugu adag ayaan u cambaareyneynaa dilkii C/risaaq Cali Cabdi (Silver) oo xalay lagu dilay Galkacyo.” ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka oo ka tacsiyadeynaaya geerida Suxufiga, ayaa yiri “Waxaan tacsi u dirayaa qoyskii, bahda saxaafadda, Maamulka Puntland iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed, waxaana EEBBE uga baryayaa in C/risaaq uu jannadii fardowsa ka waraabiyo annagana SAMIR iyo IIMMAAN naga wada siiyo.”
Wuxuu kaloo yiri “C/risaaq wuxuu ahaa Wariye dhalinyaro ah oo firfircoon lahaana mustaqbal fiican. Waa nasiib daro in dilalka suxuufiyiinta ay weli sii socdaan oo kani waa dilkii seddexaad ee saxaafada sanadkan 2014.”
Isagoo hadalkiisa sii waa, ayaa wuxuu yiri “Shacabka Soomaaliyeed uma dulqaadan karaan in dhalinta firfircoon ee u taagan danta dalka, diinta iyo dadka in la ugaarsado.”
Dhuxulow, ayaa ku booriyay ummada Somaliyeed in dhammaan loo wada istaago, sidii lagu badbaadin lahaa Suxufiyiinta, oo uu ku ammaanay kuwo horseed u ah is bedelka ka jira dalka.
“Waa inaan u wada istaagnaa dhammaantiin sidi aan u badbaadin lahayn suxufiyiinta, oo ah dadka runtii ka dambeeyey is bedelka dhabta ah iyo horumarka dalka ka jira. Warbaahinta waa tan gaarsiisa bulshada Soomaaliyeed akhbaarta iyo horumarka dalka.” ayuu yiri Wasiir Dhuxulow.